Khayaamo malaayiin karoon ah oo maxkamad la horkeenay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khayaamo malaayiin karoon ah oo maxkamad la horkeenay
La daabacay torsdag 25 juli 2013 kl 11.04
Waxaa maanta maxkamad la horkeenayaa qof dumar ah oo ay xirfaddeedu tahay jimicsiga jirka dadka bukaanka, horeyna u ahaan jirtay siyaasiyad ka hawlgasha gobolka Värmland. Waxaa qofkaan dumarka ah lagu soo eedeeyey in ay khayaamo isdabamarin ah ku sameysey lacag gaareysa shan milyan oo karoon.
Lacag kor u dhaaftay afar milyan oo karoon oo lacagtaas ka mid ah waxay haweeneydaan 58 sano jirka ahi ka khayaantay maamulka gobolka iyadoo soo gudbisay warqado ay ku dalbaneyso kharashyo ay sheegtay in ay ku baxeen dad bukaan ah oo ay siisay jimicsi jir, laakiin la ogaaday in aysan boqashooyinkaasi dhicin..
Xukunka dacwadduna wuxuu maxkamadda ka socon doonaa muddo sidded iyo toban maalmood ah. Waxaa muddadaas maxkamadda horteeda iman doono 180 markhaanti oo ay 174 ka mid ahi yihiin dadkii ay sheegatey in ay bukaan ahaan ugu yimaadeen.
Dhanka kale haweeneydaan ayaa iska fogeysey dembigaan lagu soo eedeeyey.